एसईई, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा कहिले ? - Everest Dainik - News from Nepal
एसईई, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा कहिले ?
काठमाडौंः कोरोनाका कारण स्थगित इसईई परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने चासो लाखौं विद्यार्थी र हजारौं अभिभावकमा छ ।
चैत्र ६ गतेका लागि तोकिएको एसईई परीक्षा कोरोनाका कारण सरकारले चैत्र ५ गते स्थगित गरेको थियो । यो वर्ष परीक्षामा ४ लाख ८२ हजार ७ सय ७ जना विद्यार्थी सामेल हुँदै छन् ।
२१ वैशाखमा हुने भनिएको कक्षा ११ र १२ को परीक्षा हुने/नहुने निश्चित छैन ।
सरकाले चैत्रभरी सञ्चालन गरिने विद्यालय र विश्वविद्यालयका परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बैशाखका लागि तोकिएका विषयमा केही भनेको थिएन । त्यसकारण पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पर्ख र हेरको अवस्थामा छ ।
याे पनि पढ्नुस जेठपछि मात्रै एसईईका लागि विकल्प खोजिनेः राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय भइसकेको छैन । तर, ११ र १२ को परीक्षा प्राभावित हुने देखिएको छ । त्यस विषयमा सरकारले गर्ने निर्णयको आधारण अगाढि बढने योजनामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड छ ।
सरकारले २५ गतेसम्मका लागि घोषणा गरेको लकडाउन एक हप्ता थप्ने तयारी गरेको छ । त्यसकारण इसईई, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफका लागि बैशाख पहिलो साता कुर्नुको विकल्प छैन ।
याे पनि पढ्नुस एसईई कहिले ? यस्तो छ मन्त्रालयको जवाफ